Tsy tarehimarika fotsiny: Takelapahatsiarovana an-tserasera anomezana voninahitra ireo matin’ny COVID-19 tao Brezila · Global Voices teny Malagasy
Tarehimariky ny COVID-19 manaka-danitra ao Brezila, tsy taitra ny olona
Voadika ny 02 Jona 2020 15:30 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Ελληνικά, Português, русский, Français, 日本語, English
“Ireo tsy tambo isaina” — takela-pahatsiarovana iray natokana ho an'ny tantaran'ireo tsirairay lasibatry ny coronavirus tao Brezila. Pikantsary.
Ny 23 May, nosongonan'i Brezila i Rosia ka izy no lasa firenena laharana faharoa voa mafy indrindra tamin'ny valanaretina COVID-19 eto amin'izao tontolo izao, aorian'i Etazonia. Andro roa talohan'izao izy (24/05/2020) no niaina ny 24 ora nahafatesana olona be indrindra tao aminy: 1.188 no maty vokatr'ilay aretina, araka ny volazan'ny ministeran'ny fahasalamàna. Tamin'ny 25 May, namoizana aina 23.473 tamin'ireo 374.898 tranga voamarina fa COVID-19 tao amin'ity firenena misy mponina 200 tapitrisa ity.
Manomboka miha-zatra tsikelikely amin'ny famakiana ireo antontanisa mivoaka isanandro ry zareo Breziliàna. Ny 6 May, rehefa nahatratra 8.500 ny isan'ny maty, nanokana fotoana iray ilay mpitatitra vaovao William Bonner, mpanolotra ny vaovao fandefa ao amin'ny TV Globo mandritra ny ora mahabetsaka ny mpijery, efa nandritra ny 50 taona, mba hisaintsainana ny dikan'ireo tarehimarika:
Aina valo arivo no tapitra. Ain'olona notiavin'olona hafa ireny. Ray sy reny, iray tampo, zanaka, namana, olom-pantatra,. Ary avy eo, mijanona eny anivony ihany ny alahelon'ireny fianakaviana ireny, satria ny sasany tsy mahavita intsony misaina ny maha-zavadoza ireny faty mivangongo isanandro ireny.
Manako any amin'ireo Breziliàna ireo tenin'i Bonner izay mahatsapa fa very any ambadik'ireo tarehimarika mampitampimbava ny tantaran'olombelona. Fa vondrona iray ahitàna artista sy mpanoratra no nandray fanapahankevitra ny hanao izay tsy hanadinoana azy ireny.
Ny “Inumeráveis,” na “ireo tsy tambo isaina,” dia takela-pahatsiarovana iray ety anaty serasera noforonin'ireo Breziliàna artista, Edson Pavoni sy Rogério Oliveira, izay manome voninahitra ny ain'ireo maty vokatr'ilay valanaretina. Natomboka tamin'ny 30 Aprily, ataony anaty lisitra ny anaran'ireo olona, ny taonany ary fotoam-pahatsiarovana fohifohy. Olona 20 eo ho eo no mitantana ilay tranonkala, na amin'ny fanaovana fikarohana izany, na amin'ny fanoratana sy famerenana mamaky.
Tanaty tafa iray nifanaovana tamin'ny Global Voices tamin'ny alàlan'ny WhatsApp, Pavoni nilaza fa:
Mifoha ianao dia olona 68 no maty; mifoha ianao ny ampitso dia olona 120 no maty; andro iray hafa dia mihoatra ny 200 ireo olona maty. Afaka fotoana elaela, manomboka very ny tena dikan'ireny tarehimarika ireny fa lasa toy ny tarehimarika amin'ny famantaranora, fampitandremana, na izay rehetra azo sainina ankoatra ny hoe olona. Dia lasa tsy miraharaha isika.
Taorian'ny nanafoanana ny fampirantiana tokony nataony tany Lisbon no nitsiry tao amin'i Pavoni ny hevitra hanao ilay takela-pahatsiarovana. Ambarany fa niriany ny hahita fomba iray hiasàna aminà lohahevitra miresaka “fifandraisana” no sady ao anatin'ny fametrahana elanelana ara-tsôsialy. Avy eo izy nifanome tànana tamin'i Oliviera, izay niasa saina ihany koa tamin'ny isa tsy mitsaha-mitombo hita amin'ny vaovao .
Ho an'ireo rafozan'ny namana iray niraisan-dry zareo no fotoam-pahatsiarovana voalohany tao amin'ilay takela-pahatsiarovana — Edgar Farah, 81 taona, tomponà fiarakely Volkswagen Beetle niloko manja manopy vony, sy ny vadiny Eunice Farah, 77 taona, izay nandany ny fetibe tamin'ity taona ity nifety niaraka tamin'ireo zanany sy ny zafikeliny.
Amin'izao fotoana izao dia anaran'olona 600 no hita ao anatin'ilay lisitra — mbola lavitra be an'ilay 20.000 mahery maty tao Brezila hatramin'ny fotoana nanoratana ny lahatsoratra. Tamin'izy ireny, nisy an'i Agatha, 25 taona, izay mpitia saka sy nianatra tao aminà sekoly iray fiofanana ho mpitsabo mpanampy no sady niasa tao aminà ivontoerana iray misahana ny fahasalamàna tany amin'ny iray amin'ireo ‘favelas’ ao Rio.
Ary ny an'ilay Breziliàna malaza, mpanoratra sady mpiangaly mozika, Aldir Blanc, ny an'i Julia Nieto Parra, 101 taona, izay teraka tany aminà toerana iray fambolena kafe, nahita ny fahatongavan'ny herinaratra tany an-tokantrano sy teny an'arabe ary manana zafikely miisa 17.
Tanaty tafa niarahana tamin'ny Global Voices, nomarihan'i Pavoni fa tena sempotra mitady ny fahamarinan-toerana ara-toekarena ao aminy ry zareo Breziliàna ao anatin'ilay krizy izay mora ho an'ireo antontanisa ny ho lasa atao feo lafika. Hoy izy:
Tsy ampy ireo tarehimarika. Tsy ampy mba hanakàran'ny tsirairay ny halalin'ireo fiovàna sy ny fotoana manantantara lalovantsika.